विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य दाहाल कांग्रेसमा प्रवेश
प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य थानेश्वर दाहाल नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् ।
आइतबार मोरङको कांग्रेस सुन्दरहरैंचा–४ मा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य दाहाललाई कांग्रेसमा प्रवेश गराएका हुन् ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डा. कोइरालाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई धम्की दिइरहेको आरोप लगाए । कोइरालाले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले विघटन गरेको संसद् पुनर्स्थापना गरे आन्दोलन गर्छु भनेर अदालतलाई धम्की दिएको बताए ।
‘अस्ति निर्वाचन आयोगलाई सूर्य चिह्न दे भनेर धम्की दिनुभएको थियो, हिजो विराटनगरमा आएर सर्वोच्च अदालतलाई धम्की दिनुभयो । मैले गरेको विघटनलाई बदर गर्‍यो भने आन्दोलन गर्छु रे । यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको व्यक्तिले भन्न सुहाउने कुरा होइन,’ उनले भने ।
कोइरालाले संसद् पुनर्स्थापनाको कुनै विकल्प नभएको दाबी पनि गरे ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, फागुन ९, २०७७, १४:५८:००
महासंघ र नेपाल बैकर्स संघबीच ऋण सहजीकरणमा सहकार्य गर्ने समझदारी3min read